Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd hwakagadzwa muna 1998, zviri chikamu chikamu Hebei XiongYe Group kambani. Hebei XiongYe Boka rinosanganisira xinji Guta changxing furo epurasitiki muchina fekitori, Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd, Hebei Nuohang Technology Co., Ltd.
Isu tiri boka rekambani iro rinonyanya kuburitsa furo michina, kupupa furo, kushongedzera furo, hove hove, furo mapepa ekushongedza, zvishongedzo zveKisimusi uye mbishi zvigadzirwa. Kubva pakagadzwa kambani iyi, isu tave tichitevedzera "kushandisa zvisirizvo, kuvimbika, hunyanzvi, uye hunyanzvi" sehwaro uye zvinodiwa nevatengi senzvimbo yekutanga. Akazvipira kuvaka iyo "CHX" mhando.
Kambani yedu inoshandisa vashandi vanopfuura mazana matatu, kuburikidza nekuedza kwevashandi vedu vese, kugona kwedu kwepagore kugona ndeye mamirioni gumi emaphakeji emapuru uye 1200 seti EPS michina. Kambani yedu inotarisa kudzidziswa kwetarenda, chikoro-bhizinesi kubatana, isu tiri nzvimbo yekudzidzira yekoreji vadzidzi uye nhengo yenhengo yeHebei Chamber of Commerce yeExport uye Export.Cazvino michina yedu yefuro uye furo package yakatotumirwa kuAmerica, France, Australia, Italy nedzimwe nyika makumi maviri nematunhu.
Isu takawana ISO14001 zvakatipoteredza manejimendi chitupa, Nhengo Chikamu cheHebei Foam Plastic Chamber of Commerce, CE advertising, ROHS advertising, German TUV advertising.
Isu takabatana pamwe neTonga Walmart uye China Civil Engineering Boka Co, Ltd.
Boka redu riri pedyo Shijiazhuang, Tianjin, Qingdao, tinonakidzwa nyore gungwa, njanji, mhepo chokufambisa.